बिएल विशेष. Break n Links: Media for all - Across the globe
नेपालमा जारी १३औं संस्करणको दक्षिण एसियाली खेलकुद अन्तर्गत पौडीको ब्यक्तिगत स्पर्धामा नेपालकी गौरिका सिंहले पहिलो स्वर्ण पदक जितेकी छन्।
नेपालमा जारी १३ औं संस्करणको दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा घरेलु टोलीले अहिलेसम्म ३२ स्वर्ण पदक जितिसकेको छ। नेपालका लागि साइक्लिङमा बुद्धिबहादुर तामाङले ३२औं स्वर्ण जितेसँगै नेपालले साग इतिहासमा नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ।
उनी जुरुक्क उठ्नमात्र के लागिथिन् अ‍ैया गर्दै थचक्कै बसिन्। लौन के भो ? मेरो प्रश्न म्याम ६ वर्षको हुँदा काठमाडौंमा ईट्टा बोक्ने काम गर्थे। एकदिन ईट्टा तान्दा सबै पल्टिएर मलाई थिच्यो। त्यसकै चोट बल्झिरहन्छ।
निरुता आफ्नै कार्कीबाट भारतमा बेचिइएकी रहेछिन्। उनलाई ललितपुर चापागाउँकी ५० वर्षीया सुनिता भनिने कान्छी तामाङले मधुन भन्ने स्थानको कोठीमा १० हजार रुपैयाँ भारुमा बेचेकी रहेछिन्।
आफ्नै वरिपरि ज्ञानको कन्चनगङ्गा छ। मात्र देख्न सक्ने बुझ्न सक्ने चेतना हुनुपर्दो रहेछ। आजकल दुनियाँमा जिन्दगी ३ वटा फरक धारमा बिताइरहेका देखिन्छन्। मान्छेहरु अनि, तिनै मान्छेहरु भित्र अटाएको छ अलमलधारे कित्तावाल भैरे काका।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार काठमाडौंको दशरथ रंगशालामा आयोजित भव्य समारोहबीच १३औं दक्षिण एशियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग)को औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरेकी छन्।